Google Analytics: Manara-maso ny pejy antoko fahatelo | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 16, 2007 Zoma, Aogositra 17, 2007 Douglas Karr
Mety efa namaky ianao fa nividy pejy iray ao amin'ny MillionDollarWiki. Mendrika ny vola hanampiana amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalako - heveriko fa ity dia fotoana lehibe ahazoan'ny orinasa maro manao fampanjariam-bola kely miaraka amin'ny tamberim-bola be. Misaotra manokana an'i John Chow noho ny fanetsehana ny hevitra!
Nividy ny mailaka Marketing, Blaogin'ny orinasa ary Web Analytics pejy ary te hanohy hanitatra ny atiny ho loharano feno amin'ny zavatra rehetra atao amin'ny Marketing amin'ny Email sy ny Blogging Corporate tsirairay avy. Miaraka amin'ny fampiasam-bola zato dolara, tena tsy misy dikany izany raha toa ka mitombo ny lazan'ny Wiki.
Ny tena fanontaniana dia hoe ho hita ho loharanom-baovao azo antoka ve sa tsia! Raha tsy izany dia tsy hampiasa izany ny olona - ary tsy hanana tambiny amin'ny fampiasam-bolako izany. Mino aho fa mendrika ny filokana - indrindra raha afaka mandresy izany aho LCD izay ananan'i John tamin'ny fifaninanana!
Mba 'hijerena ny fampiasam-bolako' dia tiako ny manara-maso hoe firy ny olona mitsidika ny pejy wiki. Soa ihany, ireo olona ao amin'ny MillionDollarWiki dia mamela ny olona hametraka pejy hafa ao anatin'ny pejiny amin'ny alàlan'ny frame. Toy izao manaraka izao ny syntax Wiki:
vohikala = http: //www.yourwebsite.com/your.html
fari-taniny = 0
horonan-taratasy = tsy
Noho izany, tsotra ny manara-maso ny pejy. Nanampy pejy iray aho ny tranokalako manokana izay misy ny kaody fikarohana Google Analytics ao aminy. Notondroiko tao amin'ny pejin-tranonkala izany pejy izany ary napetrako ho 1 ny haavony sy ny sakany.
vohikala = https: //martech.zone/mytrackingpage.html
Isaky ny mitsidika ny pejy wiki ny olona dia hiseho ao amin'ny Google Analytics-ko izany. Mba hahazoana antoka fa afaka manara-maso azy tsy miankina aho, nasiako masontsivana ny kaody Analytics hanarahana ny pejy Wiki. Ity ny kaody ao amin'ny mytrackingpage.html: